Raw Lorcaserin HCL powder (846589-98-8) Vaiti - Phcoker
SKU: 846589-98-8 Category: Kuonda
Raw Lorcaserin HCL powder (846589-98-8) Tsanangudzo
Kemikari Name Raw Lorcaserin HCL powder, Lorcaserin
Molecular Wsere 232.15
Biological Half-Life Iyo hafu yeupenyu ye lorcaserin inenge maawa anenge 11.Porcaserin poda inobviswa zvikuru mumuginha (92%) uye mumhuka (2.2%)
Solubility Mvura Inogadziriswa: 0.0709 mg / mL
chengetedzo Temperature -20 ° C.
APane Serotonin 2C (HT2C) rector agonist yekurema kwekurema. Kunodha kudya kwekudya nekusimudzira satiety mukati
Raw Lorcaserin hydrochloride powder i hydrochloride yakawanikwa nokuita lorcaserin powder neyakafanana yehydrochloric acid. Inoshandiswa sechirwere chinopesana nekupisa. Lorcaserin hydrochloride inonzi 5HT2c receptor agonist inoratidzirwa kushandiswa kune vanhu vakuru vane BMI ≥30, kana avo vane BMI ≥27 uye pamwe nechimwe chimwe chiremera-chakafanana nehutachiona, chirwere cheshuga 2 kana dyslipidemia.Lorcaserin Hydrochloride powder inoshanda nekudzivisa kudya uye kudya inokonzera manzwiro evanhu, uye inofungidzirwa kuti irege kunyura kwechirwere chepachiviri chevhudhilar chinoshandiswa nekushandiswa kwe-5-HT2B receptors, nzvimbo yehuropi inozivikanwa kutamba basa guru pakuronga nzara uye kudya kwekudya. Nokuita izvi, zvinokonzera kudya kwekudya nekuderedza kudya uye kuita kuti munhu anzwe akazara kunyange mushure mekudya kudya zvishoma kudarika. rakagamuchirwa nhasi neDFA muchisarudzo chinokosha mushure memakore ekuongorora kweCNUMX.
Lorcaserin hydrochloride powder inonyatsoratidzirwa sechinhu chinogadziriswa kuderedzwa-kudya koriori uye kuwedzerwa kwemuviri wekuita kwehuwandu hwehutano hwehutano muhutano hwevanhu vakuru (BMI ye30 kg / m2 kana kuti mukuru) uye vanhu vanorema kudarika (BMI ye27 kg / m2 kana kupfuura) ine nhengo imwechete inorema-yakasangana nayo.
Lorcaserin hydrochloride powder inoshandiswa pamwe chete nezvokudya uye maitiro ekurapa kuneta. Iyo dzimwe nguva inoshandiswa kurapa kuneta kunogona kuwirirana nechirwere cheshuga, cholesterol yakakwirira, kana kuwedzerwa kweropa.
Lorcaserin hydrochloride haigoni kubata chero hupi hwehutano hwehutano (hwakadai sehutano hwepfungwa, chirwere cheshuga, kuwedzerwa kweropa). Ramba uchitora chero mimwe mishonga yako chiremba akaraira kuti uite izvi.
Kunyange zvazvo chaiyo nzira isingazikanwi, inofungidzirwa kuti inosanganisira kusarudza kushandiswa kwe-5-HT2C receptors mune anorexigen pro-opiomelanocortin neurons mumusana we arcuate we hypothalamus. Izvi zvinokonzera kuderera kwekudya kudya uye kuve nekugadzikana nekusimudzira kusunungurwa kwe alpha-melanocortin inokurudzira hormone, iyo inoshanda pa melanocortin-4 receptors.
Lorcaserin hydrochloride powder inoshanda kuburikidza nekudzora chido - kunyanya kuburikidza nekuita kuti brain brain receptors ive serotonin, neurotransmitter inokonzera manzwiro ekugadzikana uye kugutsikana. Kunwa kwezvokudya kunotungamirirwa ne-satiety center, iri mu-ventromedial nucleus ye hypothalamus uye nzara centre iripo mu lateral hypothalamus. Zvinyorwa zvakasiyana-siyana zvinobva kumusoro uye maturakiti ematumbo zvinoshandura pakugadzira nucleus, umo maviri emhando dzeeuroni dzinodzora kudya kunowanikwa. Chokutanga, boka rekudya rinokurudzira rinobudisa mapuroteni ane chokuita neagouti uye neuropeptide Y; uye chechipiri, chikafu chekudya chinokonzerwa nekodhaine uye amphetamine inotorwa (CART) uye pro-opiomelanocortin (POMC) neurons. POMC ine 5-HT 2C receptors, iyo iyo yakashandurwa inoburitsa alpha-melanocyte-stimulating hormone (alfa-MSH). Izvozvo zvinodzivirira uye zvinokurudzira neuron zvinowedzera mapurojekiti epadhiso yepisto in hypothalamus. Paraventricular nucleus ine melanocyte 4 receptors (MC4R) iyo inhibitisa chido mukurapa kwemitambo lorcaserin hydrochloride powder inoita sarctic 5-HT 2C agonist paPOMC neurons, iyo inokonzera kusunungurwa kwe alfa MSH. Kuwedzera alfa MSH inoshanda paMC4R mumusana wepasitricular mu hypothalamus, zvichiita kuti kuderedzwa kwechido. Mu supratherapeutic doses, lorcaserin hydrochlorider inoshandawo pane 5-HT 2B uye 5-HT 2A receptors.
Benefits yeLorcaserin Hcl powder (846589-98-8)
Lorcaserin HCL powder inosarudza 5-HT2C receptor agonist iyo inofungidzirwa kuderedza kudya kwekudya kuburikidza nepakati pePOMC system. Lorcaserin HCL powder zvakabatsirwa:
Lorcaserin HCL powder inoshandiswa pamwe chete nezvokudya uye maitiro ekurovedza kuneta.
Lorcaserin HCL powder dzimwe nguva inoshandiswa kurapa kuneta kunogona kuwirirana nechirwere cheshuga, cholesterol yakakwirira, kana kuwedzerwa kweropa.
Lorcaserin HCL powder haigoni kubata chero hupi hwehutano hwehutano (hwakadai sehutano hwepfungwa, chirwere cheshuga, kuwedzerwa kweropa).
Yakakurudzirwa Lorcaserin Hcl powder (846589-98-8) Dosage
Lorcaserin HCL powder inouya muefomu yepeti uye inotorwa kazhinji 1-2 nguva pazuva, kana pasina kana kudya. Lorcaserin inofanira kushandiswa pamwe chete nekodori yakadyiwa kudya uye chirongwa chekuita zvekuita.
Nhamba yakakurudzirwa ye lorcaserin hcl powder ndeye 10 mg inogadzirwa nemuromo kaviri pazuva. Lorcaserin inogona kutorwa pasina kufunga nezvekudya. Lorcaserin hcl inofanira kuregererwa nevarwere vanokundikana kuwana zvishoma kana 5% kushayiwa kwemazuva nevhiki 12 sezvo varwere vangave vasina kukwanisa kurasikirwa nekuremerwa nekurehwa nekuendeswa mberi.
Zvikanganiso yeLorcaserin Hcl powder (846589-98-8)
Lorcaserin Hcl powder inoshandiswa mukurapa kusingaperi kwehutano hwekutakura kune vanhu vakuru vane muviri wehuwandu huwandu (BMI) we30 kana mukuru (obese) sekuwedzera kune kuderedzwa-koriori kudya uye maitiro. Inobvumidzwawo kuti ishandiswe nevanhu vakuru vane BMI ye27 kana yakakura (inopfuura simba) uye vane unenge humwe humwe hutano hunokonzerwa nehutano hwakadai soutachiona hwepamusoro (hypertension), kana kuti high cholesterol (dyslipidemia). Zvisinei, inogonawo kuva nemamwe matambudziko. Sezasi:
▲ Tiye anowanzovhiringidza madhara:
▲ Zvimwe zvinowanzoitika asi zvinokonzera mimwe migumisiro yakaoma inosanganisira lorcaserin inosanganisira:
FDA Yakagamuchirwa Lorcaserin HCL Nokurapa Kwekuwedzera
Bohula, Erin A., Wiviott, Stephen D., McGuire, Darren K., Inzucchi, Silvio E., uye al: Mwoyo Mumuviri weLorcaserin muOnweight or Patient Patients, The New England Journal of Medicine, 2018
Zvokudya uye Drug Administration, Mishonga Inotora Nguva Yakare Kurema Isu Kudzora, Pakubudiswa, Yakabudiswa 17 July 2012
Ashley Gustafson, Cammile King, Jose AR, National Centre yeByotechnology Information, PMC Nyaya, MediMedia, USA Lorcaserin (Belviq), Online, September 2013